2009 August | MoeMaKa Burmese News & Media
>Pwintphyu Nandar – Miyazaki the master of Anime and his hit-movies
> မီယာဇာကီရဲ့ ကလေးလူကြီးအသည်းစွဲတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကာတွန်းရုပ်ရှင်များ ပွင့်ဖြူနန္ဒာ (မောင်ရစ် ဘာသာပြန်တယ်) သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ ဒီတခါလည်း မီယာဇာကီတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ။ သူက အလွန်ကို ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ အယ်နမီ (anime) ကာတွန်းရုပ်ရှင်တပုဒ်...
>SPDC mentions about the Kokang area for the very first time
> ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲများအကြောင်း စစ်အစိုးရ ဖွင့်ချပြီမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂သြဂုတ် ၃၁၊ ၂ဝဝ၉ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းမှာ နယ်စပ်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၉ ဦးကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရာမှ စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကို သွားရောက်...
>students’ movement 21
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၂၁)၁၉၈၈ – ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ (ဒုတိယပိုင်း)အောင်ဝေးသြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းမှာ အစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့တဲ့...
> ရယ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မောဇာနည်ဝင်းသြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ ယိုးဒယား ရုပ်မြင်သံကြား နံပတ် ၇ လိုင်းမှာ ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတို အစီအစဉ်တွေ လာတတ်တယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကြုံရတတ်တာတွေပါ။ ဖြစ်နေတဲ့...
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစများနိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ၊ စိစစ်ရေးရုံး၊ ကာတွန်းဆရာ အကြံပြုချက်၊ လက်နက်ငယ် အဖွဲ့ ၃၀အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းသြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ စိစစ်ရေးရုံးက နေပြည်တော်ကို အထိမခံခုတလော လေထန်ကုန်း၊ လေအန်ကုန်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များမှာ ပြောနေကြတဲ့ထဲမှာ...
>30th H1N1 patient in Rangoon
> အယောက် ၃၀ မြောက် ၀က်တုပ်ကွေး လူနာ ရန်ကုန်တွင် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခဲ့ပုံရမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်တွင် အယောက် ၃၀ မြောက် H1N1 တုပ်ကွေး...
>SPDC vs. US
> အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးအရှိန်ကို စစ်အစိုးရ လျှော့ချနေပြီမိုးမခ အထောက်တော် အမှတ် ၀၀၁သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်အပေါ် မကောင်;မြင်မှုများကို အသားပေးသည့် ဖော်ပြချက်များကိုပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့အထိ သတင်းစာများတွင် တွေ့ရသည် မြန်မာသတင်းစာများတွင် “အမေရိကန် နှင့်...
> မိုးမခရဲ့ သြဂုတ်လ စာကိုး စကားကိုးသြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ “မောင်ဝိတ်ကို အာဏာပိုင်တွေက မျက်နှာသာပေးပြီးတော့ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ ပေးဖတ်တယ်။ အဲ့တော့ ကိုဖိုးတုတ်က သူတို့ကိုလည်း ပေးဖတ်ဖို့ တောင်းဆိုတာကို အရာရှိ...
>New clashes leave 1 dead, dozens injured
> ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲ တရုတ်ဘက်မှ တဦး သေဆုံးဓာတ်ပုံသတင်းသြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉မြန်မာပြည် ကိုးကန့် ဒေသမှ ထွက်ပြေးလာသော အရပ်သားတချို့ကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်တွင် ယနေ့ တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်း။ မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ကိုးကန့်တိုိင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့...
> အမေရိကန်က မြန်မာ့အရေး ကွင်းဆင်းပြီး အချက်အလက် စုနေဓာတ်ပုံသတင်းသြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ယမန်နေ့က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော် ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ Lynne Well နှင့် အဖွဲ့သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ...
>Junta kept arresting and releasing Burmese activists
> စစ်အုပ်စု၏ အဖမ်းအဆီးများနှင့် ပြန်လွှတ်ပေးသူများ စာရင်းရရှိသမျှ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄ သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်မှာ ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေးစာတမ်းများ ဖြန့်ချိတယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူ မမာမာအေးကို ထောင်ဒဏ်...
> ရေလယ်မှာ ဆီသယ်ကြသူများဝင်းမြတ်၊ ရန်ကုန်သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း သင်္ဘောကြီး ကျောက်ချ ရပ်နားရာ နေရာ အလုံကျောက်ချစခန်း။ အလုံဆိပ်ကမ်းမှာ စားအုန်းဆီတွေ ချခဲ့ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို ပြန်လည်ထွက်ခွာမယ့် စားအုန်းဆီတင် သင်္ဘောကြီး...
>Mar Mar Aye 283
> ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီး ရှိသေးတယ် အမှတ် (၂၈၃) တောင်သမန်အင်း နားက ခြေရာများမာမာအေးသြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော် မူကြပါစ ရှင်။ မာအေး...
>Ko Mic Ke Sing – New Burmese History Q & A – Part 2
> သမိုင်းအသစ် ဖတ်စာအသစ်အတွက် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ – ၂ ကိုမိုက်ခဲစိန် သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ စာဖတ်သူတွေဆီက ထပ်ဖြည့်ပေးတဲ့အချက်တွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းပြောပါစေခင်ဗျား။ ဥပမာ အာဏာသိမ်းပြီးခါစမှာ အထွေထွေသပိတ်ကြီးကို စစ်အုပ်စုက ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့ဆီမှာ...
>fighting forces up to 30,000 to flee to China
> တရုတ်ပြည်သို့ ထွက်ပြေးရသူ သုံးသောင်းကျော်ပြီဟု ကုလသမဂ္ဂ ထုတ်ပြောမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၅သြဂုတ် ၂၀၀၉မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်မတော် (MNDAA) ဟု အမည်ရသည့် ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့်...
>Yebaw Shaung a.k.a. Pado Mahn Nyein Maung
> ကိုကိုးကျွန်းမှ သက်စွန့်ဆံဖျား လွတ်မြောက်ခဲ့သူ ရဲဘော်ရှောင်း ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ခင်လွန်း ကိုကိုးကျွန်း အကျဉ်းစခန်းမှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ပင်လယ်ပြင်ကို လှေငယ် လှေတစင်းဖြင့် သက်စွန့်ဆံဖျား ဖြတ်သန်းခဲ့သူ တော်လှန်ရေး...
>Junta’s Kyant Phut started new campaign – borrow money
>ငွေချေးခြင်းဖြင့် ကြံ့ဖွံ့က မဲဆွယ်နေပြီ ယုယုခင်၊ ရန်ကုန် သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြို့က လှမ်းမြင်နေရသည့် ဒလမြင်ကွင်း ရန်ကုန်မြို့ တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ဒလမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ များတွင် ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့ အစည်းမှ...
> မီဒီယာကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မည့် နွယ်သာကီ ဂျာနယ် စတင် ထုတ်ဝေမိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန် သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ဂျာနယ် အမှတ် ၂ မျက်နှာဖုံး နအဖ အစိုးရ၏ တန်ပြန်ဝါဒဖြန့် ဘလော့ဂ်အဖြစ်...
>Maung Kaung – Give & Take
> အလျော်အစား မောင်ကောင်းသြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီ ဘ၀ကြီးထဲလေဖမ်း လေလျော်ဘ၀တွေကခြေကုန် လက်ပန်းကျ။ ရွှေတနေ့ ငွေတနေ့ဘ၀များစွာထဲမှာမှသူတောင်းစား ဖြစ်တဲ့နေ့…ပိုများနေတဲ့ ဘ၀တွေပါ။ ခေတ်က မကောင်းတာလား ဘ၀က မလှတာလားသူခိုးကို ဓါးရိုး...
>Burmese Band – Lazy Club to entertain Burmese in Fort Wayne
> ဖို့ဝိန်းမြို့ ဇေတ၀န်ကျောင်းရန်ပုံငွေအတွက် လေဇီးကလပ်မြန်မာတီးဝိုင်း ဖျော်ဖြေမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲခရီးစဉ်ဖြင့် လှည့်လည်နေသော မြန်မာခေတ်ပေါ်ဂီတ၀ိုင်းတခုဖြစ်သည့် လေးဇီးကလပ်နှင့် မြန်မာခေတ်ပေါ်အဆိုတော်များသည် လက်ရှိ သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း...